Mba mila miova amin’izay… | NewsMada
Mba mila miova amin’izay…
Par Taratra sur 11/11/2019
Anisan’ny fanambin’ny fitondrana ny hoe fanovana: fitantanana, fomba fiasa… Na izay hatao aza, mijery lavitra sy asa goavana amin’izay. Tsy moramora ny fiatrehana izany, na amin’ny fanovana fomba fijery sy fisaina ihany aza. Tsy vita indray andro ny fanarenana sy ny fanorenana; eny, na ny fanonerana izay tsy vita hatramin’izay aza.
Amin’izany, tsy misy fiovana firy ny hoe fanoherana. Tsy mety milamina, ohatra, na ny fametrahana izay ho lehiben’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimierampirenena ihany aza. Ny tsy fisian’ny lalàna no ialana vonkina, na ireo samy mpanohitra aza tsy mahay mifandamina: misy za-dratsy amin’ny fiadiana toerana fotsiny ihany?
Fiadiana sy fitadiavana toerana hatrany no zava-dehibe, mahamaika… Ady fiady? Politika io. Na izany aza, tsy mahita fomba hahatongavana amin’izany ny sasany afa-tsy izay hisian’ny korontana amin’ny fitsikerana befahatany, ny hialan’ny mpitondra fialana hoe tsy mahavita ny andraikiny… Nefa mahavita ny andraikiny ve ireo hoe mpanohitra?
Na ny miatrika fifidianana aza, tsy sahy sy tsy vitan’ny maro aminy. Ny lalàna sy ny rafitra hatrany no ialana vonkina. Nefa politika io, arakaraka ny fifandanjan-kery sy ny tombontsoa iadiana. Misy ny mitady hamboly sy miandry korontana? Na tsy miady izay hisian’ny fifandimbiasam-pahefana milamina sy mazava amin’ny alalan’ny fifidianana.
Mila miova amin’izay… Inona, ohatra, ny vina na tetikasan’ny mpanohitra hanoherana sy hihoarana amin’izay tsikerana ho tsy mety ataon’ny mpitondra amin’izao? Mila resen-dahatra amin’izany ny vahoaka mba hifidianana azy ireo amin’ny manaraka. Na amin’izao fifidianana kaominaly izao aza, tsy vitan’ny sasany ny mirotsaka na mandrotsaka.
Ho azo amin’ny inona àry ny vahoaka hanara-dia ny tena? Indrindra ny fahefam-panjakana… Tsy efa lasa ny zavatra taloha? Tsy hoe marina sy hotoavin-teny tsinona rehefa avo feo sy miteny matetika. Mandra-pahoviana?